सावधान ! लकडाउन उल्लंघन गरे ६ महिना कैद हुनसक्छ ,लकडाउनको बेला के-के गर्न पाइन्छ ? – Sudarshan Khabar
सावधान ! लकडाउन उल्लंघन गरे ६ महिना कैद हुनसक्छ ,लकडाउनको बेला के-के गर्न पाइन्छ ?
११ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोक्ने प्रयासमा एक साताका लागि देशलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ । साथै देशभरका नेपालीहरुलाई चैत ११ गतेदेखि चैत १८ गतेसम्म बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ ।